Super Mario lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Super Mario lalao
ny tontolo virtoaly dia tsy azo sary an-tsaina tsy misy aterineto lalao Super Mario. Miaraka Luigi – ny rahalahiny, dia manitsaka ny alalan 'ny expanses ny ady biby goavam-be, mampidi-doza nandrava holatra, nitondra lanja. Ianao izany koa nisarika ny maimaim-poana, mamela anao milalao foto-kevitra isan-karazany. Eto dia mipetraka ao ambadiky ny kodiarana ny traktera sy mitantana izany ho any amin'ny olana madinidinika eo an-dalana, fanangonana hazo sy ny mety ho capsize. Fotoana iray hafa, izy dia mpikambana ao nidobodoboka be tompo na rivotra toerana. Mario dia na aiza na aiza, ary na dia azo jerena ao amin'ny foto-kevitra miaraka amin'ny endri-tsoratra malaza hafa toy ny sokina Sonic ,.
Kintana Super Mario Egypt
World Mario World 3: The Finale
Fahaveloman'ny antoko Super
Survival Super Mario Earth
Super Mario mahita ny fahasamihafana
World Super Mario: Mpanohitra i Luigi
New Super Mario World 1 Ny roa ambin'ny folon'ny majika
Lalao Jigsaw an'ny naman'i Mario
Mario fandokoana Fa Kids
Ny bokin'ny Mario Driving Coloring Book
Mario Bros mamonjy Princess
Battle of Kingdom Kingdom
Super Mario Mission Tsy azo atao
Super Mario Crush lalao 3
Mitsambikina Super Mario
Ady amin'ny balaonina
Mario dia mahita ny fahasamihafana
Tifitra Super Mario Bubble Shoot
Tontolo Super Marios
Super Mario Bros: Làlana mankany amin'ny Infinite
Lalao Super Mario tamin'ny Category:
Farany Super Mario lalao
Lalao Online Rehetra Super Mario lalao
ny tsy mety maty lalao Super Mario
tamin'ny 1985, Nintendo namoaka ny lalao ny Super Mario sy Luigi – plumbers roa izay mandehandeha ny paritra sy ny ady amin'ny fahavalo. Dia nanipy ny mahazatra asa noho ny andriambavy iray tsara tarehy, izay efa niondrana an-gadra ao amin'ny holatra Koopa sokatra Fanjakana. Ary rehefa nandroso dia mampidi-doza, ny rahalahy tsy fantany momba ny fahoriana izay efa nitsena, fa mba mihemotra tara sy andriambavy miandry ny mahery fo.
ny lalao dia natao ho an'ny mpilalao roa, fa azo atao ny hiatrika ny dingana tsirairay, fotsiny amin'ny alalan'ny endri-tsoratra ara anelanelan'ny. Ny lalao ka lasa malaza fa ny haben'ny ny varotra ao amin'ny Guinness nitondra boky fitadidiana, ary ny orinasa no nanao azy Nintendo ny raharaham-barotra karatra. Fa amin'izao andro izao, dia tsy mila mividy na inona na inona, satria Super Mario lalao maimaim-poana amin'ny aterineto tolotra ho an'ny lalao vavahadin-tserasera.
Ankoatra ny amin'ny tsy manam-paharoa dikan 'ny gameplay, ny tontolo virtoaly dia nanana fotoana mba hitombo ny Clone izay Mario no isa manan-danja lehibe indrindra. Ankehitriny mihaona litera hafa ny kilalao sy ny miady aminy na mitondra tena ho toy ny mpiara. Ohatra, Sonic sokina dia tsy nisalasala ny ekipa miaraka Mario ho an'ny tanjona tsara, ary hiteny aminy hanohitra zombies izay manafika an-tranony. Miady eny izy ireo, ny mpandray anjara dia ekipa iray, ary manambatra ny fahaizany ho ny tsara. Fa aza adino ny fanangonana vola madinika, izay voalaza amin'ny endrika lalao hevitra ho voninahitrareo aho.
Ary rehefa nanomboka nilalao Super Mario, dia ho hitanao ny tenanao amin'ny hafa ny toe-piainana:
eny amin'ny rivotra,
dia hitsambikina amin'ny ambaratonga,
mizara ny mazes,
mba hahazo volamena eo amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny mpilalao fototra dia tena mailaka, ary mahita foana ny fomba fisehosehoana ny fahaiza-manao, ary ny hampitombo ny fahaizana. An-tsorony Na ahoana na ahoana, ary na dia ny hiady tamin'ilay dragona dia tsy ho tsy mahazatra, ary ny fandresena ny lanitra tao amin'ny afaka manidina na ny Hang-glider dia hivadika ho traikefa nahafinaritra iray mampientam-po, na dia tsy maintsy miady fahavalo. Mitam-piadiana, mba hanomboka amin'ny, basy afo indray dragona, tia ady tantely sy ny zavaboary diso fandray izay vonona ny mandany anareo, fa raha misy basy dia ho ampy ho an'ny asa fitoriana, tonga ny basy, ary hanely azy manodidina.
Ny tsy manam-petra isan-karazany ny fanazavana ny lalao
Indray mandeha koa, Super Mario milalao maimaim-poana amin'ny aterineto dia tsy maintsy ho eo ambany rano. Nanapa-kevitra ny handeha Mario antsitrika, fa tsy manana traikefa, ary noho izany dia miakatra foana ny fatiny. Mba hanampiana azy mba hitoetra ao amin'ny lalina, manondro izany mitsambikina amin'ny holatra, fa Mitandrema ny fahavalo sambo mpisitrika – angisy sy ny mponina rehetra amin'ny biby.
Mario mba hampiofanana amin'ny fahaizany mamikitra, manomboka misambotra ny dinosaurs ao amin'ny lalao, tena mitovy amin'ny « miandry fotsiny ianao! &Raquo;, izay manangona atody ny amboadia miaraka amin'ny perches, misambotra ny harona.
Online lalao ao amin'ny Super Mario hanatitra ny fitantanana ny fiara hafa sy mba hitondra enta-mavesatra. Super Mario voafehiny tsara ny fahaiza-manao ny mpamily, ary ankehitriny malaza steers ny traktera teny an-dalana, fanangonana hazo tao amin'ny tranofiara. Tamin'ny voalohany, dia mora ny zavatra rehetra, fa rehefa mitombo entana. Dia ilaina ny hanenjanana kokoa, mba tsy hiasa ny amin'ny manaraka indray, fa tsy mba hihena. A entana amin'ny kamiao hydrating, mahazo tombontsoa izay hanatsarana ny fiara, fanoloana ny kodia sy ny maotera no matanjaka kokoa. Misy ho anao ao amin'ny faran'izay Mario hilalao maimaim-poana ao amin'ny lalana isan-karazany. Azo fitifirana lalao, Arcade, miady, Action, Flying, Puzzles na fanatanjahan-tena kilalao. Misy hatsarany ao amin'ny tsirairay avy ireo, ary indraindray kosa ny zava-nitranga tsy nampoizina. Ny ankizy rehefa falifaly aminy nandoko ny sary, izahao ny fahasamihafana sy ny fitoviana, manangona Puzzles sy milalao tenifototra, hazakazaka, sy ny maro hafa faritra izay tsy misy toerana ho an'ny fahasorenana sy ny vapidity.
Ny rahalahy roa-MS
Izao Rehetra Izao rahalahy plumbers Luigi sy Mario nandritra ny roa-polo taona, mifehy ny sain'ny mpilalao avy amin'ny taranaka fara mandimby. Tetikasa mahomby kokoa ny lalao orinasa tsy mbola fantany. Ny niandohan'ny ny maraina ny vanim-potoana nomerika, ny tantara velona mandraka androany, fa tsy manome fitsaharana. Izay vao tsy manao fampielezan-kevitra malaza izany toerana! Dia nafindra ny mahery fo ny tontolo hafa, anisan'izany ny cinematic superheroes. Mario ny tenany voatery hitifitra tsipìka, basy, nitsambikina ny spikes. Na ny vehivavy hiakanjo ny lalao matetika mampiasa izany toetra amam-panahy. Fa tsotra, mahazatra ny rehetra filokana menavazana rafitra ahafahana mahatsapa tanora sy sambatra. Mario – dia mitsambikina amin'ny lohan'ny ny mpanohitra, orinasa saina amin'ny faran'ny fototr'izany ny sehatra sy tsy miova Kupa, tossing ny famaky. Na dia ireo izay toerana ity – ny vokatry ny fikarohana fangataham-panazavana « Super Mario-tserasera lalao maimaim-poana », manaiky – ny tena iray Mario.
Na dia nisy tena nahomby sequels. Ohatra, ny dikan ny lafiny tontolo izao, izay ny mahery fo nomena ny fahafahana hitora zavatra sy ny fahavalo. Fa ny ambony indrindra ihany isan'ny mpankafy tia milalao Super Mario Canon ihany no safidy. Ny fahombiazan'ny ny lalao izao tontolo izao (na ny marimarina kokoa tontolo sy – ny mpanoratra sy ny hoe ny sehatra ny lalao - tontolo) Mario tsy mbola nihoatra ny olona. Vazivazy, fanfics, mampihomehy lahatsary momba ny Adventures ny mahery fo amintsika mandraka androany. Na dia mpilalao izay teraka ela taorian'ny vanim-potoana ny rahalahy Mario, matetika ny mijery ny tambajotra amin'ny Super Mario hilalao maimaim-poana amin'ny aterineto. Ny zava-tsoa, ​​maoderina emulators mamela anao hilalao saika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Tsy dia mila ny fametrahana ny rindrambaiko, tsy izay mba hividy ny cartridge. Mandeha fotsiny-tserasera sy hankafy ny toerana tena mahery fo sy ny niainany.
Play aterineto Super Mario azo atao sy eo amin'ny namany Sary www. lalao-lalao. fr. ua. Izahay manokana dia tsy voangona ny tsara indrindra ihany no dikan lalao ity, fa koa fanitarana vaovao tanteraka, fanovana, ary ny dikan. Rehefa voalohany hahafantatra ny lalao mahafinaritra ity, aza hadinoina ny manomboka amin'ny maha-kanônika ny andalan-teny safidy. Avy eo ianao dia afaka hiampita ny tontolo rehetra noforonina teo amin'ny hampionona. Ary avy eo dia miezaka ny fanandramana lamaody fanahafana. Azo antoka, tsy afaka mahita liana amin'ny hafa dikan, afa-tsy ny voalohany. Ao amin'ny Super Mario lalao maimaim-poana dia tsy voatery ho eo amin'ny toerana. Afaka manao izany eo amin'ny solosaina. Fa izao no misintona ny asa ny lalao. Eto amin'ity pejy ity dia ho hitanao ny ankamaroan'ny ny misy lalao Super Mario amin'ny aterineto, ka amim-pahasahiana – Kupa sy Gumba no miandry anao.